FASAL CANAB "LYDIA" - VITICULTURE
Noocyada ugu caansan ee farsamo ee loo isticmaalo winemaking waa "Isabella" iyo "Lydia".
Isla markaa, fasalka labaad wuxuu ku jiraa hooska, sababtoo ah wuxuu leeyahay wax badan oo isbarbardhig ah Isabella, oo waxay inta badan ku magacaabaan "Pink" ama "Red Isabella."
Hase yeeshee, canabku "Lydia" wuxuu leeyahay dabeecado gaar ah, taas oo uu ku farxay dad badan oo hareereysan sida hiwaayad iyo sida canab loo isticmaalo miiska, iyo sida warshad ornamental ah.
Sidoo kale, noocyada kala duwan waxaa lagu gartaa tiro badan oo bogsiin ah.
Waxay ku saabsan tahay mudnaanta iyo ciqaabta canab "Lydia" waxaana lagala hadlayaa hoos.
Sharaxaad ka mid ah astaamaha "Lydia": sidee loo dhibaateeynayaa noocyo kale?
Canbaarta ujeedada guud ee loo yaqaan "Lydia" waxaa loo soo bandhigay qaaradda yurub ee dhaqanka duurjoogta ah, kaas oo markii dambe la ogaaday oo noqday beer dalag. Waqtigeena, kala duwanaanta noocaas ahi waxay leedahay meel aad u ballaaran oo waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee koonfurta of Russia, Ukraine iyo Moldova.
Inkastoo xaqiiqda ah in beerashada "Lydia" ay ku jirto miisaaniyad warshadeed maahan mid caan ah sida hore, laakiin kala duwanaanta ayaa ka dhex heleysa taageerayaasha.
Marka laga tago halsano, noocyada kala duwan ee sabiibku waxay sii deyn karaan walxaha halista ah ee aad u khatar u ah bani-aadamka.
Noocyada kala duwan ee rucub canab ah "Lydia"
Kooxaha kala duwan ee noocaan ah waxay leeyihiin qiyaas aad u yar, inkasta oo ay ka muuqdaan muuqaal ahaan. Celceliska tirada ee farabadan ee canab "Lydia" waxay gaareysaa 100-110 garaam, inkastoo dabcan ay jiraan kuwo ka weyn. Waxay yihiin qaabka qaabaynta, ay leeyihiin laamyo badan, taas oo ah sababta ay qaabkoodu u dabacsan yahay. Sidaa darteed, berry ee rucubada ayaa sidoo kale sameeyay aan weyn, kaliya 3-4 garaam.
Qaabka iyo xajmiga berry waa mid aad u la mid ah "Isabella", laakiin midabka maqaarku waa casaan, oo leh midab casaan leh. Dhadinta miraha "Lydia" waa mid gaar ah, waxay leedahay dhadhan wanaagsan oo strawberries iyo caraf udgoon. Sababtoo ah dhadhanka gaarka ah, badanaa ma jecla noocyada kala duwan, inkastoo kuwa kale ay tahay calaamadda canab. Waa muhiimada bixinta iyo waliba khaas ahaan qiyaasta sare ee sonkorta ee saxarka berry - qiyaastii 18%.
Calaamadaha fursado fara badan oo canab ah "Lydia"
Waxyaabaha sarreeya waa sifooyinka loo yaqaan 'Lydia canab' oo la jecel yahay oo ay ku koraan sifooyinkooda by beeralayda. Inkasta oo midhaha ay u bislaadaan iyo muddada dheer (qaangaadhka la kala saari karo wuxuu dhacaa 158 cisho oo daaqsiin ah, ku dhowaad bartamihii Sebtembar), sug in ay runtii u qalantaa.
Marka laga reebo, tirada canab si fiican u dillaacday hal duur, kaas oo kor u kaca heerka celceliska, wuxuu gaari karaa 120 sentitir halkii hektar. Waxaa la ogaaday in xataa xitaa hal baadiyaha ah, oo aan xitaa u baahnayn daryeel badan, waxaad soo ururin kartaa qiyaastii 40 kiilo garaam oo wanaagsan.
Heerarka noocan oo kale ah ee dhalidda sabiib ah ayaa suurtagal ah sababtoo ah bislaan wanaagsan ee geedka canabka ah. Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado in hal xayawaan uu si buuxda u hagaagi karo 3 ilaa 6 rucubood. Isla mar ahaantaana, baadiyaha uma baahna doqon.
Maxay tahay darajada "Lydia" waa in loo doortaa koritaanka goobta?
• Kala duwanaantan waa mid guud ahaaneed waxayna leedahay dhammaan xuduudaha lagama maarmaanka u ah diyaarinta khamriga iyo casiirka.
• Kala duwanaanshuhu ma aha mid si xamaasad u ah daryeel wuxuuna leeyahay wax-soo-saarka sare.
• Caanaha iyo xayrta maqaarku ma saameynayaan geedka canabka ah ee Lydia mana ubaahnid buufin ka hortag ah.
• Is-hortaagaanta noocyada kala duwan ee heerkulku hooseeyo waxay suurtogal u tahay in ay koraan canab dhan Bartamaha Ukraine iyo xitaa Ruushka.
• Waxaa calaamad u ah joogitaanka ubaxa labka dheddig ee labadaba, si canabku u awoodaan inay iskood u gartaan.
• Dalaggu ma baqdo qoyaan badan.
• Kuurku wuxuu si fiican uga jawaab celiyaa bacariminta macdanta iyo Bacriminta dabiiciga ah.
• Awooda foosha ayaa xaqiijineysa in canabkiisa Lydia ay ku habboon yihiin gaadiidka.
Dhibaatooyinka canab: caqliga ee noocyo sii kordhaya "Lydia"
• Ka mid ah cayayaanka beeraha, beeraha kala duwan ee "Lydia" ayaa inta badan ay saameeyaan phylloxera, kuwaas oo ay si aan khatar lahayn lahayn.
• Iyadoo aan jirin macdan bir ah oo ka mid ah ciidda geed caleenta ah, cudur sida sida "chlorosis" ayaa kicin kara.
• Isku-xidhanka iyo caleemaha geedka canabka ah ee Lydia waxay leeyihiin koboc degdeg ah, taas oo saameyn karta hoos u dhaca tayada miraha. Sidaa darteed, baadiyaha u baahan tahay baro iyo raadinta caleemaha cagaaran.
• Aad bay muhiim u tahay inaad maskaxda ku hayso in canabka bislaaday si fiican loola xiriirin karo. Sababtan awgeed, dabayl xoog leh, way jebi karaan, taas oo u baahan waqti goynta dalagga beeraha.
• In Europe, noocyada this waxaa laga mamnuucay beerashada: haddii dhammaan xaaladaha halsano lagama maarmaan aan la kulmin, canab ah soo saari karaa qaar ka mid ah waxyeello jirka jirka bini-aadanka keeni kara sclerosis badan. Canab cusub ayaa ah mid ammaan ah oo caafimaad leh.
Noocyo canab ah "Lydia": ka soo degaya qalabka
Canab beerto: guga ama dayrta?
Canab beerto ayaa si fudud u fudud, inkastoo ay weli tahay mudan in la baaro sharciyada ugu muhiimsan iyo qaababka geedi socodkan. Gaar ahaan waxyaabo badan oo nuucaan ah waxay la xiriiraan wakhtiga sannadka ee loogu talagalay inuu soo dego. Ka dib oo dhan, waxay ku beeri labada guga iyo xilliga dayrta, laakiin si loo ogaado sababta dadka qaarkood ay u doortaan hal mar, halka kuwo kale ay weli u qalantaa.
1. Beeraha xilliga guga waxaa badanaa loo tixgeliyaa in la aqbali karo, tan iyo waqtigaan dhammaan dalagyada la beeray. Waxaa jira xilli badan oo diiran ka hor, kuwaas oo geed caleemaha la beertay ay heli doonaan wakhti ay ku sii xoogaystaan ​​meel cusub oo waxay noqon doontaa mid xasilloon marka uu dhaxlo marka hore. Intaa waxaa dheer, canab ah beeray guga ee sanadka soo socda wuxuu awoodi doonaa inuu keeno goosashada ugu horeysay. laakiin wali, sida soo degiddu waxay leedahay dhowr faa'iido:
• Beeraha xilliga guga waxaa lagu sameeyaa ciid ah qalajin, sidaas awgeed dhoofintu waxay u baahan tahay waraabin badan.
• Xulashada noocyada kala duwan ee canabka ah ee xanaanooyinka guga way adagtahay, maaddaama ay badanaa la iibiyo xilliga dayrta.
• Guga, miraha aan la fileynin badanaa waxay u muuqan karaan si lama filaan ah, taas oo dhaawici karta caleemaha cagaaran ee seedling Lydia.
2. Beeraha xilliga dayrta waa asal ahaan hab loo ilaaliyo abuuritaanka canabka ka hor inta aaney bilaabin kulaylka guga. Xaqiiqdii, inta lagu jiro xilliga qaboobaha, koritaanka baadiyaha aan dhaqdhaqaaq lahayn, kaliya nidaamka asaasiga ee seedling si tartiib tartiib ah ugu habboon xaaladaha cusub. Beerashada xilliga dayrta waxay leedahay hal keliya, laakiin waa cillad aad loo ixtiraamo: Dhirta qaboobaha waxay si weyn u waxyeeleyn kartaa abuurista, sidaa daraadeed waxay u baahan tahay in si wanaagsan loo dhigo.
Siyaabaha lagu beero canabkiisa Lydia: midkuu ka wanaagsan yahay inuu doorto
Qiimaha noocyada hore ee sabiib ah waa in lagu faafin karo siyaabaha suurtogalka ah: abuur beeraha, geedo geedo ah iyo gooyn dhir ah oo adeegso isbedelka. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah qaybinta ballaaran ee canab "Liibiya", dhibaatooyinka la iibsado geedo iyo gooyn waa in aan kicin.
Geedka geedo waa habka ugu fudud, inkasta oo uu jiri karo shimbir duug ah, waxa fiican in la doorto naqshad.
Marka la jarayo, geedku aad buu u fiican yahay, si dhakhso ah ayuu u dhaqaa inuu helo xididka iyo koritaanka.
Waa maxay meesha ugu fiican ee lagu beeri karo canab "Liibiya"?
Meelaha lagu beero noocyada kala duwan ee canabka waa in lagu soo xulo shuruudaha soo socda iyo sifooyinka:
1. Canab for koritaanka wanaagsan waxay u baahan tahay ciidda bacrin ah. Sidaa darteed, waxaa ugu fiican in la qaado carrada madow ama carrada loamy fudud. Waxaa muhiim ah in carrada uu awood u leeyahay qoyaanka, sidoo kale ma uusan iska ilaalin muddo dheer. Qodobka ugu wanaagsan ee biyaha dhulka ku yaala meesha aad ku socoto canab waa inay ahaataa ugu yaraan 1.5 mitir.
2. Goobta beerto ee geedka Lidia waa in ay noqotaa mid wanaagsan oo aan la ilaalin karin dabaylo qabow leh ama qabow hawo qabow. Sababtan awgeed, guriga, canabku inta badan waa la beeray dhinaca koonfureed ee aqallada ama gasebos, sidaas oo loo adeegsan karo sida geedo qurxoon iyo beerta.
3. Haddii aad doonaysid inaad dhirato dhowr duurka, boqolkiiba inta u dhaxaysa waa in la sameeyaa ugu yaraan 80 sentimitir. Beerta canabka ah ee "Lydia" waxay leedahay korriin xoogan, wayna u nugul tahay, sidaa daraadeed hal baadiyaha waa in aan loo oggolaan in ay hoos u dhigto kan kale.
Beerta loo yaqaan "sapi": Waa maxay nuusiyada aan la iloobin?
Aad bay muhiim u tahay in la ogaado in diyaarinta ceelka canabkana lagu qaado wax badan ka hor intaan beerto. Ka dib oo dhan, tiro badan oo bacriminta iyo ciidda bacrin ah waa in la keeno xagga hoose ee yaamayska, kaas oo by waqtiga beerto waa in ay degaan. Gaar ahaan:
• Markaad qodo dalool leh oo qoto dheer oo ballaaran oo aan ka yarayn 0.8 mitir, waxaan hoos u dhignaa xagga hoose ee 5-mitimitir ee dhagax la jajabiyey.
• In ka badan, ciidda bacrin ah ayaa la shubay, oo aan ka saarno markii aan qoday daloolka, ka dibna walxaha organic iyo Bacriminta macdanta (potassium, fosfooraska, birta) iyo mar kale carrada.
• Keegkan oo dhan waa in si wanaagsan loo isku qasan yahay waxaana lagu daboolaa lakabka kale ee carrada sahlan. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii xididdada yaryar ay toos ula xiriiraan Bacriminta si toos ah, waa la gubi karaa.
• Marka la beero xilliga dayrta, godku waa inuu ku sii jiraa gobolka tan ugu yaraan laba toddobaad, iyo guga, inta lagu jiro jiilaalka oo dhan.
Kobcin ka hor inta beerto waa in si fiican loo kontoroolaa, hubi haddii aysan jirin wax waxyeelo ah oo la qalajiyey. Sidoo kale, ka hor inta laga beerto, nidaamka asaasiga ah waxaa la dhigaa biyo dhowr maalmood, iyo sidoo kale ku xereen xal in kicinaysa koritaanka iyo formation of xididada. Xididdada seedling waxaa laga yaabaa in la yareeyo wax yar ka hor inta aan la beeri.
Diyaarinta seedling ee god, waxa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo suurtagalnimada ahmiyada ciidda, iyo qoorta xididada hoose u dhigo heerkulka kaas oo ka sareeya dusha ciidda. Beeridda carrada seedling waa in ay ahaato taxaddar, ma ogolaanayso samaynta barkimada hawada ee ceelka. Markaad qodo dalool leh oo ah dhirta oo kaliya oo dhexda dhexe ah, waxaa habboon in ay ku shubanto 10 litir oo biyo ah oo ay ku galayso saamiga dhinaca waqooyiga ee seeding kaas oo u adeegi doona taageero. Marka xigta, waxaan dhamaystirnaa aasinta godadka godadka iyo ku shub canab 30 litir oo biyo ah.
Ka dib markii la beero abuurka Liibiya, ciidda ku wareegsan waa in xaqiiqda la daboolo mulch. Waxay u oggolaanaysaa qoyaanka in ay sii dheeraato carrada, samaynta waraabin ka badan.
Maro "Lydia" on rootstocks ee noocyo kale oo sabiib ah
Si aad uisisid "Lydia" ee kaydka, waa ugu horreyntii muhiim ah in la doorto oo loo diyaariyo goynta noocyada kala duwan. Waxaa la gooyaa ka soo baxa baadiyaha "Lydia", taas oo ay noqon doonto ku filan inaad ka tagto 2-3 indhood. Waxaad u badbaadin kartaa illaa guga adoo buuxinaya ciid oo ku dhaafaya meel leh heerkul aan ka sarreynin 12ºS. Ka hor intaan toosin, qaybta hoose ee jarista waa la jarayaa: laba dhinac oo kaliya ayaa la gooyaa, oo ka tagaya laba "garbaha" dhexda.
Qaybta kore ee gooyuhu waa wax lagu duugo, taas oo u oggolaan doonta in ay u adkeyso xaaladaha cimilada oo aan luminayn qoyaanka. Qeybta gooyuhu waa inay had iyo jeer ku jirtaa biyo iyo xalka leh kobcis dhisid ("Humate") ka hor intaan la bilaabin.
Diyaarinta kaydka waa in ay sidoo kale noqoto mid dhamaystiran. Burburkii hore waa la jaraa. Ka dib markii ay noqon doonaan 5-8 cm penechek kaliya. Geyn cutub waa in la nadiifiyaa si siman, ka saaro wasakhda iyo qashinka. Ka dib markaa waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad kala qaybiso saamiga: si toos ah bartamaha waxaad u baahan tahay inaad sameysid faraq yar oo taas oo goynta (ama dhowr) ay ku haboonaan karto.
Isticmaalka canabkuna wuxuu ka kooban yahay isagoo jaraya jarista qaybta (qaybta la gooyey oo kaliya) oo si adag ayaa loo xoqay saamiyada. Sidaa awgeed, goobta tallaalka waxaa lagu adkeeyaa cajalad daba-dheer oo dhar ah oo keeni kara ilaa sanadka soo socda. Si labadaba laydhka iyo dhirtuba u ilaaliyaan qoyaanka, labaduba waxay ku daboolaan dhoobo. Miisaankii ka dib markii la barbar-dhigayo ayaa si weyn u waraabiyey, ciidda ku wareegsanna waa la qoday oo mulched.
Waxaa kale oo xiiso leh in laga akhriyo ku saabsan canab madow
Daryeelidda geedka canabka ah "Lydia": sida loo kordhiyo dhalidda iyo tayada miraha?
Saameyn aad u wanaagsan oo ku saabsan koritaanka geedka canabka ah iyo sameynta dalagga dalagyada waqtigooda. Iyadoo loo marayo hordhac dheeraad ah ee qoyaan inta lagu jiro ubaxyada burooyinkeeda iyo ka hor ubaxyada baadiyaha, baadiyaha ayaa hela tamar badan oo billaabanaya si bilaa horumar ah.
Ka dib markii ay dhammeeyaan ubax iyo inta lagu jiro dhismaha berry on inflorescences, waxaad u baahan tahay inaad fuliso waraabin kale oo baadiyaha ah. Inta lagu jiro muddooyinka abaarta daba dheeraatay, baadiyaha sidoo kale lagama tagi karo iyada oo aan qoyaan, sababtoo ah iyada oo aan berry aheyn ma kori doono cabbirka loo baahan yahay iyo waxay noqon kartaa acidic.
Ka dib kasta waraabinta waa mid aad u muhiim ah in la daboolo ciidda agagaarka weelka duurjoogta. Mulch waxay u adeegtaa oo kaliya in ay ilaaliso qoyaan ee ciidda, laakiin sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii bacriminta organic qurux badan. Ka dib dhan, humus ama balka madow waxaa inta badan loo isticmaalaa sida mulch. Lakabka mulch ayaa sida ugu wanaagsan loo sameeyaa ku saabsan 3 sentimitir, sii kordhaya ama hoos u dhigi kara dhumucdeeda iyadoo ku xiran xilliga xagaaga iyo xaaladaha heerkulka.
Canabka "Lydia" waxaa muhiim ah in lagu daro quudinta, samaynta bacrin-saarista ciidda ama, oo ay weheliyaan waraabinta, iyaga oo ku boodaya biyaha.
Sida kala duwan oo kale, canab kuwan u baahan tahay manjooyin joogto ah ee caleemaha iyo gacmo. Ficilada noocan oo kale ah waxay kaa caawinayaan oo keliya inaad sameysid baadiyaha wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kaydiso nafaqooyin dheeraad ah oo loogu talagalay dalagga cusub. Noocan oo kale ah baadiyaha, sida noocyada kala duwan ee "Lydia" waa in la gaabiyaa iyadoo aan ka yarayn 6-8 indhood. Ha iloobin inaad jarjarisid jaranjarada oo aad ciribtiro caleemaha baadiyaha, kaas oo loo baahan yahay in la qabto bartamaha bisha Juunyo.
Inkasta oo xasilloonida wanaagsan ee "Lydia" ka hor inta aanuu barafku ku jirin, gobollada waqooyiga badan baadiyaha u baahan tahay hoyga xilliga jiilaalka. Tani waxay si gaar ah u tahay mid ka mid ah da 'yar yar oo keliya duurka. Iyaga oo dhidibada, thanks to size yar yar, waa mid aad u fudud. Markaad dhiseysid tuubo aan hoos ugu dusin baadiyaha, sapling (ama lafdhaqaaq) ayaa gabi ahaanba lagu daboolay ciid, taasoo ka dhigaysa buur ilaa 10 sentimitir korkiisa.
Si aad u sameyso dhisme noocaan oo kale ah xilliga jiilaalka, waxaa habboon in la taageero iyada oo la adeegsanayo guddiyada ama laamaha geedaha. Haddii xaaladaha cimiladu u baahan yihiin hoyga buundada qaangaarka ah, fursada ugu fiican waa in la abuuro wadiiqo ka baxsan filimka. Laakiin, tuugo, waxaa muhiim ah in hawada ay hoos u socoto si aan duurka u istaagin.
Inkasta oo uu ka soo horjeeda cagaarka "Lydia" ee cudurada fangas, haddana waxay u baahan tahay tallaabooyin ka hortag ah si loola dagaallamo phylloxera. Aad bay muhiim u tahay in la buufiyo baadiyaha, ugu diyaargaroobka ugu wanaagsan ee ah Actellic, Zolon iyo Confidor. Haddii jirrooyinka loo arko caleenta - waa in la gooyaa oo la burburiyaa. Waxay yareysaa halista waxyeellada cayayaankan ee canabka beeritaanka on carrada bacaadka ah.